The Ab Presents Nepal » प्रेसर लो भएर धरानकी शिक्षिका सृष्टि अधिकारी र बिर्तामोडकि रोजिनाको मृ*त्यु भयो !प्रेसर लो भनेको केहो? कसरि बच्न सकिन्छ आउनु होस जानकारी लिउ !
प्रेसर लो भएर धरानकी शिक्षिका सृष्टि अधिकारी र बिर्तामोडकि रोजिनाको मृ*त्यु भयो !प्रेसर लो भनेको केहो? कसरि बच्न सकिन्छ आउनु होस जानकारी लिउ !
धरान -: धरानकी १९ बर्षिय सृष्टि अधिकारीको र बिर्तामोडकि रोजिनाले लो ब्लड प्रेसरको कारण मृ**त्यु भएको छ । मृ*तक सृष्टिको आफन्तहरुका अनुसार दिउँसो एक्कासी लडेकी उनको उपचारको क्रममा मृ**त्यु भएको हो र बिर्तामोडकि रोजिना दिउसो खाजा खान साथ ढालिन हस्पिटल लगियो रातको १० बजे उनको निधन भयो उनको डाक्टर बन्ने सपना पनि उनि सगै बिलायो भने परिवारको आशा भरोशा सगै गुम्यो अहिले परिवार ठुलो पिडा बाट गुज्रीरहेको छ भने धरान १२ मा बस्दै अधिकारी परिवारको आर्थिक अवस्था समेत कमजोर थियो । कक्षा १२ पढेर धरानकै मेरो मन्टेश्वरी काम गदै आएकी सृष्टिको धरान स्थित विपि कोईराला विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको क्रममा मृ**त्यु भएको हो ।
डाक्टरहरुले प्रेसर लो छ भनेका थिए । हामी आयुसिमा ८ दिन सम्म राखेर पनि छोरी बचाउँन सकिएन सृष्टिका आमा बन्दना अधिकारीले भनिन् । छोरीले केहि गर्लिन भन्ने थियो मृ*तक सृष्टिकी आमा बन्दनाले भनिन् ।
अक्सर मानिसले लो ब्लड प्रेसरलाई त्यती गंभिरतापूर्वक लिदैनन जति हाइ ब्लड प्रेसरलाई लिने गर्छन् । यद्यपी लो ब्लड प्रेसरलाई पनि नजरअनदाज गर्नु ख*तरा साबित हुनसक्छ । त्यसैले समयमै यसबाट बच्ने उपाय खोजिहाल्नुपर्छ ।
के हो ब्लड प्रेसर ? -: सामन्य रक्तचाप १२० र ८० हुनुपर्छ । तर, यदि तपाईको ब्लड प्रेसर ९० र ६० वा त्यो भन्दा कम छ भने, तपाईलाई लो ब्लड प्रेसरको समस्या छ ।
किन हुन्छ ? -: मुटुको समस्या( मुटुको भल्भमा समस्या, हृदयघात वा हृदयसम्बन्धी रोगले पनि रक्तचाप कम हुनसक्छ । इन्डोक्राइन समस्या( थाइराइड, रक्तअल्पता, लो ब्लड सुगर र कहिले कहिं मधुमेहले गर्दा पनि रक्तचाप न्युन हुनसक्छ ।
डिहाइड्रेसन शरीरमा पानीको मात्रा अपुग हुँदा न्युन रक्तचापको समस्या देखापर्न सक्छ । रक्तश्राव चोटपटकको कारण रक्तश्राव भएर अचानक शरीरमा रगतको कमी भयो भने पनि रक्तचाप न्युन हुन्छ ।
पोषणको कमी शरीरमा भिटामिन बि १२ र आइरनको कमीले एनीमिया हुन्छ । यसले गर्दा शरीरमा पर्याप्त मात्रामा रेड ब्लड सेल बन्दैन र ब्लड प्रेशर लो हुन्छ ‘।
औषधी उच्च रक्तचाप, मुटुरोग, पार्किसन्स, डिप्रेसनको औषधी सेवन धेरै लिनाले पनि रक्तचाप न्युन हुनसक्छ । यसका साथै चक्कर आउँदा, डेँगु मलेरिया, कुनै डरलाग्दो दृश्य देख्दा रत्तचाप न्युन हुनसक्छ ।
लक्षण -: थकान लाग्छ, कमजोरी महसुष हुन्छ, चक्कर आउँछ, दृष्टि धमिलो हुन्छ,छालामा पहेंलोपन देखिन्छ ।
शरीर चिसो हुन्छ,, धेरै तिर्खा लाग्छ, छिटो छिटो सास बढ्छ ‘।
किन खतरनाक छ ?-: यदि तपाईको न्युन रक्तचाप छ भने त्यसको समयमा उपचार गर्नुपर्छ । अन्याथा यसले खतरा रोगलाई निम्त्याउँछ । यसले तपाईको स्नायु प्रणाली वा मस्तिष्कमा असर गर्न सक्छ । चक्कर आएर जहाँपनि ढल्न सक्छ’ ।
के गर्ने ? -: अक्सर चिकित्सकले नुन कम खाने सल्लाह दिन्छन् । तर, न्युन रक्तचापमा सोडियमको मात्रा केहि धेरै हुनुपर्छ । यदि नुन सेवन मन पर्दैन भने सोया सस सेवन गर्न सकिन्छ । भरपुर पानी पिउनुपर्छ ‘।
यसरी सुरक्षित रहने -:धेरै तातो पानीले नुहाउन हुँदैन, यसले शरीरमा तापमान बढ्छ । पर्याप्त निन्दा लिनुपर्छ । नियमित र थोरै समयको अन्तरालमा थोरै थोरै खाना खाने । चिन्ताबाट टाढै रहनुपर्छ ‘।
घरेलु बिधी -: १०,१५ वटा किसमिसलाई रातभर पानीमा भिजाउने, बिहान एक एक किसमिश चपाएर खाने र पानी पिउने । ७ वटा बदाम रातभर भिजाउने । त्यसलाई पिसेर दुधसँग सेवन गर्ने । १० वटा तुलसीको पात पिसेर रस निकाल्ने । त्यसमा १ चिया चम्चा मह मिलाएर बिहान खाली पेटमा पिउने । हरेक दिन ब्ल्याक टि पिउने यसले रक्तचाप बढाउन सहयोग गर्छ’।